Kupona kit parwendo rwako: Izvo zvausingakwanise kupotsa | Absolut Kufamba
Alberto Makumbo | | Updated on 15/09/2020 12:02 | vamwe
Patinogadzirira kufamba, kuve neese anodiwa mubatsiri kubva panguva yekutanga kuitira kuti rwendo rwedu rubudirire runokosha chose. Nekudaro, kanopfuura kamwe chete tinorasikirwa ne "chinhu" icho chatinoona chakanonoka. Luckily zvedu kupona kit parwendo rwako achave akanakisa pane vabatsiri vako. Une peni nebepa zvinobatsira here? Evernote zvakadaro? Takatanga!
1 Zvinyorwa zvakarongeka
3 Nharembozha paunosvika kunhandare yekuenda
4 Inotakurika nhare mbozha
5 Mvura yemumabhodhoro nenzungu
7 Mushonga mudiki kabhineti
8 Kadhi risina makomisheni
9 Shangu dzinonyaradza
10 Gwara rekufambisa
11 Bhuku rekunyora
Rwendo rwese rwunotanga nezvinyorwa, kunyangwe usati watenga matikiti. Nekuti kana iwe pasipoti Yakapera uye iwe hauzive, unogona here kubhururuka? Hatityi isu. Wakatarisa here mutengo weiyo maviza? Kana uchikwanisa kuitenga online kana iwe paunosvika panhandare? Kana iwe uchida a mvumo yekufambisa semuenzaniso, kufamba kubva kuMadrid kuenda kuMedellín kuburikidza neMiami? Kuva nepasipoti uye vhiza usati waita chero chinhu chakakosha kana uchitanga kushanya kwako.
Kunyangwe zvisinganyanyo kudikanwa kuenda kumajekiseni kana uchienda kune imwe nyika, kutarisa kuti ndedzipi dzinosungirwa zvichienderana nenzvimbo yekuenda yakakosha. Tarisa majekiseni emunyika inoenderana, enda kunzvimbo yako yekudzivirira nekukurumidza sezvazvinogona (hapana kumirira paminiti yekupedzisira) uye kufamba usina kumbonetseka nekusangana neumhutu muAfrica panguva isingatarisirwi.
Nharembozha paunosvika kunhandare yekuenda
"Nerd. Ndiri kungoshandisa iyo Internet kana ini ndakabatana nehotera yeWi-Fi ». Hongu, hongu… Munyika yakanaka, kuita pasina matekinoroji matsva zvakanyanya sezvatinogona kana tichifamba ndicho chinhu chakanak kuita, asi tichida kana kwete, tiri kuramba takasungirirwa mugore. Dambudziko remhuri kuburikidza neWhatsApp, mamamepu epamhepo, matipi ekufamba, nezvimwe. . . Tinoda kuziva zvese panguva yakakodzera uye, nekudaro, vanhu vazhinji uye vazhinji vanowana SIM kadhi rine data .
Inotakurika nhare mbozha
Paunofamba, iwe unonzwa kuti yako bhatiri mbozha iri kudhiza nekukurumidza zvakanyanya kupfuura zvakajairwa. Uye hazvisi zvishoma. Iwe watoisa kare mapikicha makumi maviri ku Instagram, haumire kushandisa WhatsApp, kubvunza matipi uye kurodha matsva ekufambisa maapp. Zano redu? Zviitire wega inotakurika charger unit uye unogona kuchaja nharembozha yako kubva kune iro rakarasika bhazi mumakomo eBolivia kana mutembere yepamusoro-soro muNepal usinga bvunze mumabhawa ese kana uchikwanisa kuibatanidza. Pane iwo madiki madiki makuru ayo anoverengeka.
Mvura yemumabhodhoro nenzungu
Kana iwe ukaenda kune imwe nyika iyo yakanyanyisa kusiyana neyako, ona India, Cuba kana South Africa, kungodudza mienzaniso mishoma, kugara uine mvura yemumabhodhoro yakakosha kwete chete kana tiri kutsvaga kuwana kuzvidya kubva kumvura yemuno, asiwo ku hydrate nguva dzose patinenge tichifamba. Panguva imwecheteyo, gara uchiedza kutakura bhegi remichero yakaomeswa, ingave walnuts kana nzungu, nekuti hazvitore nzvimbo uye zvinotipa simba nguva dzese, kunyanya mushure merwendo rurefu irwo kuburikidza neAtlas yeMorocco.
Pamwe, munzvimbo isingatarisirwi, mupunga une huku uchakuendesa kuimba yekugezera yaunobva maawa matanhatu gare gare. Kuchengeta kutonga pamusoro pezvatinodya kune imwe nyika uye mhedzisiro yayo haisi nguva dzose iri nyore basa, ndosaka kuve nekusiyana Serum sachets kusanganisa nemvura yemumabhodhoro Ichave iri yakanakisa kana zvasvika kune hydrating uye recharging pasina kugara uchingotenga Aquarius.
Mushonga mudiki kabhineti
Pamusoro pezvirevo zvesarum zvambotaurwa, kuva nekitsi yekubatsira yekutanga musutukesi yako kunokosha kana uchinge watarisana nezvipingamupinyi zvakasiyana zvingamuka. Rumborera, chiitiko chedhara ... chero chinhu chinogona kuitika. Kuti uite izvi, tora Ibuprofen, gauze, betadine, zvinodzora marwadzo, Fortasec yechirwere chemanyoka, inodzinga zvipembenene, uye antihistamines kuitira kuti ugare wakadzikama nekutenda kune yakanakisa yekupona kit parwendo rwako. Iwe hauzive kuti uchavada riini.
Kadhi risina makomisheni
Mumakore achangopfuura pakave nemakambani mazhinji akavhura makadhi akagadzirirwa kunyanya kune vafambi vanotsvaga kudzivirira makomisheni mune imwe nzvimbo yekuenda. Mienzaniso yakadai seBnext, inokutendera kuti ubatanidze account yako yekubhangi kune yako Bnext account, chinja mari yese yaunoda uye woibvisa kubva kune chero ATM yepasirese, uine chokwadi chekuti makomisheni anodzorerwa kwauri mukati memaminetsi mashoma. Hunyanzvi hunotitendera kuti tidzivise zvimwe zvinowedzera zvaungakwanise kutyisidzira paunodzoka kubva parwendo.
Munguva yerwendo rwako zvechokwadi uchapedza maawa marefu uchifamba. Ngazvive kumusoro kweiyo kereke, kuburikidza nenzvimbo yepamusoro yeParis, makomo eChina kana mabhishi ePhilippines. Mamiriro ezvinhu akasiyana nehupenyu hwedu hwezuva nezuva hunoda vabatsiri sezviri madikanwa seshangu dzakanaka kana zvasvika pakubheja kunyaradzo. Band-Aids haifanire kunge isipo zvakare.
Pamusoro peichi chinyorwa chaunofanirwa kubhukimaka, pane akasiyana mawebhusaiti uko iwe kwaunogona kuwana ruzivo nezve kwaunoenda. Nekudaro, isu tinoramba tichitamba kubheti pagwaro rehupenyu hwese senzira yekuramba uchikwanisa, kuva pedyo nenzvimbo huru nenzvimbo dzekufarira kana trace, kunyange zvirinani, nzira iyo isingagare yakatsanangurwa zvizere kusvikira wasvika kwauri kuenda. Mumwe mudiki anodzorwa mubatanidzwa wekupona kit parwendo rwako.
Patinofamba, nyika nyowani inovhura pamberi pedu, uye iine, nyowani manzwiro anotitungamira mukuzviongorora kukuru. Bhuku rakanaka rekunyorera rinova rakanakisa kanivhasi yekutora ese manzwiro, kuwana musimba rekunyora rusununguko rwatichazokwanisa kusangana narwo apo, makore gare gare, patinotangazve izvo zvatinonyora. Kana iwe uri iwe, iwe uchibheja zvakanyanya pakudhirowa, enzaniso mabhuku ekunyorera ave fashoni yazvino yatove kutsvaira masocial network uye izvo zvinokutendera iwe kuburitsa muimbi mukati mako kune akanakisa mamiriro.
Iwe unotove uine kitambo chako chekupona chakagadzirira parwendo rwako?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Absolut Kufamba » Kupona kit parwendo rwako: Izvo zvausingakwanise kupotsa
Chii chekuona muFlorence